Mpanazatra avy any Shink Big Glass Beads, Reflection Big Glass Beads
Description:Kitapo mainty lehibe ,Reflection Twinkling Big Glass Beads,Fanoratana Big Glass Beads,Big Glass Beads For Highway Marking,,
Home > Products > Kitapo mainty lehibe
Ny vokatra avy amin'ny Kitapo mainty lehibe , mpanofana manokana avy any Shina, Kitapo mainty lehibe , Reflection Twinkling Big Glass Beads mpamatsy / orinasa, vokatra avo lenta avoakan'ny Fanoratana Big Glass Beads R & D sy ny famokarana, manana ny tolotra lavorary lavorary isika ary fanohanana ara-teknika. Miandrandra ny fiaraha-miasanareo!
High-Visibility Voankazo matevina  Contact Now
High Retro-reflection Twinkling Big Glass Beads  Contact Now
Akanjo lava vita amin'ny hydrophobic  Contact Now
Kitapo lehibe vita amin'ny glaura ho an'ny marika fanenoman-damba  Contact Now
Kitapo mibontsina lehibe vita amin'ny pensée vita amin'ny thermoplastic  Contact Now
Ny mikraoskaopy lehibe mikitoantoana ho an'ny marika eny an-dàlana  Contact Now
Kitapo lehibe vita amin'ny lava-bato vita amin'ny silane  Contact Now
Kitapo maitso lehibe 20-14 mesh Large Beads  Contact Now
Size Range 0.85-1.4mm Big Glass Beads  Contact Now
Ny diamond dia 850-1400um Glass Beads  Contact Now
Kitapo mainty lehibe  Contact Now
Quality High Microspheres Big Glass Ireo labozia lehibe lehibe ampiasaina amin'ny loko eny an-dàlana, dia afaka mampitombo ny taham-pahasalamana amin'ny alina, indrindra amin'ny làlana mivatravatra amin'ny orana sy ambany. Ity...
High Roundness Glasperlen Ity diamondra ity fanenon-jiro ity dia roa na telo heny noho ny kofehy mahazatra. Ny ampahany tsy mihoatra lavitra noho ny loko dia avo kokoa noho ny kofehy mahazatra; Noho izany dia nitombo ny fisainana momba ny...
High-Visibility Voankazo matevina Ity diamondra ity fanenon-jiro ity dia roa na telo heny noho ny kofehy mahazatra. Ny ampahany tsy mihoatra lavitra noho ny loko dia avo kokoa noho ny kofehy mahazatra; Noho izany dia nitombo ny fisainana momba ny...
High Retro-reflection Twinkling Big Glass Beads Ity diamondra ity fanenon-jiro ity dia roa na telo heny noho ny kofehy mahazatra. Ny ampahany tsy mihoatra lavitra noho ny loko dia avo kokoa noho ny kofehy mahazatra; Noho izany dia nitombo ny...
Akanjo lava vita amin'ny hydrophobic Ireo labozia lehibe lehibe ampiasaina amin'ny loko eny an-dàlana, dia afaka mampitombo ny taham-pahasalamana amin'ny alina, indrindra amin'ny làlana mivatravatra amin'ny orana sy ambany....
Kitapo lehibe vita amin'ny glaura ho an'ny marika fanenoman-damba Ireo labozia lehibe lehibe ampiasaina amin'ny loko eny an-dàlana, dia afaka mampitombo ny taham-pahasalamana amin'ny alina, indrindra amin'ny làlana mivatravatra...
Kitapo mibontsina lehibe vita amin'ny pensée vita amin'ny thermoplastic Ity diamondra ity fanenon-jiro ity dia roa na telo heny noho ny kofehy mahazatra. Ny ampahany tsy mihoatra lavitra noho ny loko dia avo kokoa noho ny kofehy mahazatra;...
Big Glass Microspheres Ity diamondra ity fanenon-jiro ity dia roa na telo heny noho ny kofehy mahazatra. Ny ampahany tsy mihoatra lavitra noho ny loko dia avo kokoa noho ny kofehy mahazatra; Noho izany dia nitombo ny fisainana momba ny...
Kitapo lehibe vita amin'ny lava-bato vita amin'ny silane Ity diamondra ity fanenon-jiro ity dia roa na telo heny noho ny kofehy mahazatra. Ny ampahany tsy mihoatra lavitra noho ny loko dia avo kokoa noho ny kofehy mahazatra; Noho izany dia...
Ity diamondra ity fanenon-jiro ity dia roa na telo heny noho ny kofehy mahazatra. Ny ampahany tsy mihoatra lavitra noho ny loko dia avo kokoa noho ny kofehy mahazatra; Noho izany dia nitombo ny fisainana momba ny mari-pamaharan'ny lalana,...
Size Range 0.85-1.4mm Big Glass Beads Ity diamondra ity fanenon-jiro ity dia roa na telo heny noho ny kofehy mahazatra. Ny ampahany tsy mihoatra lavitra noho ny loko dia avo kokoa noho ny kofehy mahazatra; Noho izany dia nitombo ny fisainana momba...
Ny diam-penina dia 850-1400 sy lavarangana lavarangana lehibe Ity diamondra ity fanenon-jiro ity dia roa na telo heny noho ny kofehy mahazatra. Ny ampahany tsy mihoatra lavitra noho ny loko dia avo kokoa noho ny kofehy mahazatra; Noho izany dia...
Kitapo mainty lehibe Ity diamondra ity fanenon-jiro ity dia roa na telo heny noho ny kofehy mahazatra. Ny ampahany tsy mihoatra lavitra noho ny loko dia avo kokoa noho ny kofehy mahazatra; Noho izany dia nitombo ny fisainana momba ny...
Shina Kitapo mainty lehibe mpamatsy
Ny isam-bolana dia 850-1400mm (20-14mesh) miaraka ≥80% amin'ny fihenam-bidy. Ny fiakarana manokana eo amin'ny moron-tsofina glasy dia afaka manatsara ny fatorana eo amin'ny loko sy ny vera, ka afaka mitombo ny faharetana.
Kitapo mainty lehibe Reflection Twinkling Big Glass Beads Fanoratana Big Glass Beads Big Glass Beads For Highway Marking